Dɛn na Bible Ka Wɔ Dadwen Ho?
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bengali Bislama Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese (Shanghainese) Chinese (Sichuanese) Chinese (Yunnanese) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish French Georgian German Greek Gujarati Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kannada Kazakh Kikaonde Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Lingala Lithuanian Luganda Luvale Macedonian Malagasy Malayalam Maltese Marathi Myanmar Nepali Norwegian Oromo Pangasinan Polish Portuguese Punjabi Quechua (Ayacucho) Quechua (Cuzco) Romanian Russian Samoan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tahitian Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tok Pisin Tsonga Tswana Turkish Twi Ukrainian Urdu Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
Yɛwɔ dadwen ahorow mmienu—nea eye ne nea enye. Bible boa ma yehu ne mmienu nyinaa.
Ɛyɛ bɔne sɛ obi bedwennwen?
NOKWASƐM A ƐWOM
Sɛ asɛm haw obi anaa biribi reteetee no a, ɛto no adwennwen. Esiane ahoyeraw a ɛwɔ wiase nti, obiara wɔ ne dadwen.
Ɔhene Dawid kaa sɛ: “Me ne me kra nni aperepere, na awerɛhow ntena me komam da mũ nyinaa nkosi da bɛn?” (Dwom 13:2) Ɛdɛn na ɛboaa Dawid? Ɔbɔɔ Onyankopɔn mpae de ne komam nsɛm nyinaa kɔɔ n’anim, na onyaa awerɛhyem sɛ Onyankopɔn bedi aboa no. (Dwom 13:5; 62:8) Onyankopɔn ankasa pɛ sɛ yehwie yɛn komam nsɛm gu n’anim. Asɛm a ɛwɔ 1 Petro 5:7 si so dua. Ɛka sɛ: “Montow mo dadwen nyinaa ngu no so, efisɛ odwen mo ho.”—1 Petro 5:7.
Woyɛ nkurɔfo papa a, wo dadwen so tew
Nanso ade baako a ɛho hia paa ne sɛ yebetu anammɔn ayɛ yɛn dadwen no ho biribi. Nhwɛso bi ni: Bere bi na “asafo no nyinaa ho adwennwen” ahyɛ Paulo koma ma. (2 Korintofo 11:28) Nanso wantena hɔ anni abooboo kɛkɛ. Mmom ɔbɔɔ mmɔden sɛ ɔbɛkyekye asafo no mufo werɛ na wahyɛ wɔn nkuran. Ɛha no, yetumi hu sɛ dadwen piaa no maa no yɛɛ tebea no ho biribi. Wei kyerɛ sɛ, yɛn nso, sɛ dadwen hyɛ yɛn so a, biribi pa betumi afi mu aba. Nanso sɛ afoforo hia mmoa na yɛbobɔ yɛn nsa tena hɔ a, ɛbɛkyerɛ sɛ yennwen wɔn ho.—Mmebusɛm 17:17.
Sɛ dadwen hyɛ wo so boro so a, ɛdɛn na wobɛyɛ?
Ɛtɔ da a ebinom bedwen mfomso a wɔayɛ atwam anaa wɔn daakye anaa wɔn sikasɛm ho. *
Mfomso a woayɛ atwam: Tete no, ansa na ebinom rebɛyɛ Kristofo no, na wɔyɛ asabofo, apoobɔfo, aguamammɔfo, ne akorɔmfo. (1 Korintofo 6:9-11) Nanso wɔamma nea atwam no annye wɔn adwene; mmom wɔsesaa wɔn abrabɔ na wonyaa awerɛhyem sɛ ahummɔbɔ Nyankopɔn no de wɔn bɔne befiri wɔn. Dwom 130:4 ka sɛ: “Wo na fafiri wɔ wo nsam na ama nnipa asuro wo.”
Nea ebesi daakye: Yesu kaa sɛ: “Munnnwinnwen ɔkyena ho,” efisɛ “ɔkyena ankasa benya ne dadwen.” (Mateo 6:25, 34) Ɛdɛn na na ɔrepɛ akyerɛ? Ɛne sɛ, ɔhaw a ɛnnɛ yɛrehyia no, ɛno na ɛsɛ sɛ yɛde yɛn adwene si so; ɛnsɛ sɛ yɛde ɔkyena de pii so ma yɛn kɔn mu bu. Sɛ yɛde nneɛma bebree ka yɛn adwennwen ho a, yɛbɛpere yɛn ho asi gyinae bi a ɛmfata. Ɛsɛ sɛ yɛkae nso sɛ ɛtɔ da a, yebedwen biribi ho ahaw yɛn ho nanso akyiri yi yɛbɛhwɛ no na ɛnyɛ asɛm biara.
Sikasɛm: Onyansafo bi srɛɛ Onyankopɔn sɛ: “Mma me ohia anaa ahonyade.” (Mmebusɛm 30:8) Kakra a obenya atwitwa ne ho no ara dɔɔso ma no; wei na Onyankopɔn pɛ. Hebrifo 13:5 ka sɛ: “Mommma sikanibere mmma mo asetena mu, na momma nea mowɔ no ara nnɔɔso mma mo.” Adɛn ntia? Efisɛ Onyankopɔn aka sɛ: “Merennyaw wo na merempa wo nso da.” Ɛsɛ sɛ yɛhyɛ no nsow sɛ sika betumi adi yɛn huammɔ, nanso sɛ yɛde yɛn ho to Onyankopɔn so na yɛma yɛn asetena yɛ wɛ a, ɔrenni yɛn huammɔ da.
“Minhuu onipa trenee a wɔagyaw no, anaasɛ n’asefo srɛ aduan.”—Dwom 37:25.
Dadwen Befi hɔ da bi?
Sɛnkyerɛwfo bi a ɔde Harriet Green kaa wɔ atesɛm krataa The Guardian mu sɛ: “Seesei yɛrehyɛn dadwen bere mu.” Patrick O’Connor kaa biribi 2014 mu de foaa so. Ɔkyerɛw wɔ atesɛm krataa The Wall Street Journal mu sɛ: “Sɛ yɛreka a, ɛnnɛ paa na dadwen redokoro Amerikafo sen bere biara a atwam.”
“Onipa koma mu awerɛhow botow no, na asɛmpa ma edi ahurusi.” (Mmebusɛm 12:25) “Asɛmpa” a ɛka koma paa ne Onyankopɔn Ahenni ho asɛmpa no. (Mateo 24:14) Saa Ahenni no yɛ Onyankopɔn aban, na ɛrenkyɛ ɛbɛyɛ biribi a yentumi nyɛ. Ebeyi biribiara a ɛde dadwen ba afi hɔ; yare ne owu nyinaa befi hɔ. Onyankopɔn bɛpopa yɛn “aniwam nusu nyinaa, na owu nni hɔ bio, na awerɛhow ne osu ne yaw nso nni hɔ bio.”—Adiyisɛm 21:4.
“Onyankopɔn a ɔma anidaso no mfa gye a mugye di so mma anigye ne asomdwoe nyinaa nyɛ mo mã.”—Romafo 15:13.
^ nky. 10 Sɛ dadwen hyɛ obi so na ɛdan yare koankorɔ a, ɛnde ɛbɛyɛ papa sɛ ohu dɔkota. Nyan! nkyerɛ ayaresa anaa aduru pɔtee a ɛsɛ sɛ obi nya.
Wobɛyɛ Dɛn Na Adwinnwen Anhyɛ Wo So?
Ɛtɔ da a wote nka sɛ adwinnwen ahyɛ wo so paa? Ɛnde Bible betumi aboa wo.
Share Share Dadwen
Mafi Afiase Abɛyɛ Nipa Mũ
Text Baabi a wubetumi atwe nneɛma akenkan NYAN! Bible Yɛ Nhoma a Emu Nsɛm Yɛ Dɛ Kɛkɛ?
Share Share NYAN! Bible Yɛ Nhoma a Emu Nsɛm Yɛ Dɛ Kɛkɛ?
Bible Yɛ Nhoma a Emu Nsɛm Yɛ Dɛ Kɛkɛ?
NYAN! Bible Yɛ Nhoma a Emu Nsɛm Yɛ Dɛ Kɛkɛ?
Dadwene Abu So wɔ Baabiara!